Lixda wadan ee aduunka ugu awoodda badan oo shir Brussels ka dhacay hubka Iran kaga hadlay!! | Somaliland.Org
Lixda wadan ee aduunka ugu awoodda badan oo shir Brussels ka dhacay hubka Iran kaga hadlay!!
November 21, 2012	Yurub ( Somaliland.org) Madaxda lixda wadan ee aduunka ugu awoodda badan ayaa ku kulmay Brussels, shirkaasi oo ujeedadiisu ahayd siddii xal loogu heli lahaa marxaladda iyo xaaladda adag ee dalka Iran, si ay u qorsheeyaan wareeg cusub wadda-hadaladda Iran. Hadaaladdii ugu danbeeyey ee xalka loogu raadinaayey marxaladda Iran ee tobanka sanno taagan ee ku saabsan horumarinta hubka nugliyeerka ama mashruuca balaadhinta awoodda nugliyeerka ee dalkaasi Iran ayaan lagu guulaysan.
Madaxweynaha Maraykanka ee markii labaad dib loo soo doortay Barack Obama ayaa bishan cadeeyey dariiqa wadda hadaladda cusub ee diblamaasiyiinta reer Galbeedku aad u doonayaan sidda ugu dhakhsaha badan, waayo buu yidhi waxaa jira calaamaddo in Iran weli ay horumarinayso awoodeedda nugliyeerka, laakiin waxaa sii yaraanaysa fursadda daaqadda ee xalka wadda xaajoodka, waayo dawanka qayladiisu sii kordhayso ee Tehran Nugliyeerka iyo Israa,ii l oo ku hanjebtey in Nugliyeerkaasi ay duqayn doonto. Duaqayn kasta oo Israa,iil samayso waxuu ka hurinayaa Barigga Dhexe dagaalo badan, mana aha suuragal inta ka horaysa Doorashadda Israa,iil ka dhicidoonta 23 jeenaweri, waxaa sidaasi yidhi khuburadda kulansanaa ee halkaasi ku faaqidaayey xaaladda iyo nabadgelyadda Gobolka, si ay u helaan dariiq lixda wadan ee aduunka ugu awoodda badani oo si haboon ay arinta ugu soo dabaalaan is fahan iyo ka wadda shaqayn mahiima.
Waxaa jirta xaqiiqdii daaqad heshiis lagu samayn karo, laakiin daaqadaasi wey xidhmaysaa si deg degga, waxayna ku xidhantahay in Iran ay samayso waajibaadyadda caalamiggaa, waxaa sidaasi yidhi Ariel Ratuer wakiil hore uu ugu magacaabay madaxweyne Obama Arimaha Siyaasadda ee Barigga Dhexe. Rajadda ay ka qabaan arintaasi mugdigga ku jirta wadamadda ugu awoodda badan caalamka ee Britain, China, France, Germany, Russia iyo united States of America ayey naaqishaad ku samaynayaan Istaraajiyadda hawshan, kabacdi markii sadex wareeg oo hore wadda-hadaladani ah ay wax natiijaa keeni waayeen.
Qorshayaashan ayaa loo bandhigidoonaa Iran, wadda-hadalo ay isugu yeedhi doonto sarkaaladda u qaabilsan Siyaasadda Arimaha Dibadda ee wadamadda Midowga Yurub Catherine Ashton, kaasi oo diblamaasiyiintu sheegeen inuu ka dhicidoonno bisha soo socota Istanbul. Fikirkan ayaa shirkaasi Abacaddii ka dhashay, siddii laysugu xidhi lahaa waxaan la hortegi doonno dalka Iran, waxaa sidaasi yidhi sarkaal sare oo ka tirsan madaxdda reer galbeedka.
Previous Post“Xisbiyadda ayay ula Ekaan kartaa inay cod ku helayaan dhaleecaynta oo leh colaad ayaa dhacaysa”Next PostMadaxweyne Ku xigeenka Somaliland Oo Khudbad u jeediyay taageereyaasha KULMIYE ee Awdal	Blog